Ajaanib dhimasho iyo dhawac kasoogaaray werarkii hotel jaeera – STAR FM SOMALIA
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya C/Salaan Cumar Hadliye oo la hadlay wakaaladaha wararka ayaa ka hadlay Khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay Al-shabaab ku qaadeen Hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa laga soo xigtay in diblumaasi u dhashay dalka Shiinaha uu ku dhintay weerarka ka dhacay Hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho, kaasi oo jugta qaraxa laga maqlay degmooyin badan oo ku yaala magaalada Muqdisho.
Wararka qaar ayaa sheegaya in nin u dhashay dalka Kenya uu ku dhaawacmay weerarkaasi, xilli uu ku sugnaa Hoteelka Jazeera ee Magaalada Muqdisho.
C/salaam Cumar Hadliye ayaa sidoo kale sheegay in diblumaasi u dhashay dalka Kenya uu ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay hotelka jazeera ee magaalada Muqdisho.
Inta la xaqiijiyay ku dhawaad 13 ruux ayaa ku dhintay weerarka, waxaana tirada dhaawaca lagu sheegay 21 ruux kuwaasi oo la dhigay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Dadka weerarka ku dhintay ee la aqoonsaday waxaa kamid ah wariye TV Universal ka tirsanaa oo lagu magacaabo Maxamed Cabdikariin Macalin, waxaana ku dhaawacmay Salmaan Jamaal Saciid oo isna ka tirsan Universal.